महिलामा गुम्सिएको क्षमता
गंगा दहाल– आम महिलाहरुको अन्तरनिहित गुम्सिएको क्षमतालाई बाहिर निकाली त्यस क्षमताको बिकास गर्नुनै महिला सशक्तीकरण हो । महिलाहरुको क्षमताको वृद्धिका लागि राज्यले र विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुले महिलाको अन्तरनिहित क्षमताको बिकासका लागी विभिन्न प्रयास पनि गर्दै आएको देखिन्छ, सुनिन्छ तर नगन्य रुपमा मात्र उपलब्धि भएको छ । यही गतिमा जाने हो भने अझै कति पुस्ता पर सम्म जानुपर्ने हो अनुमान गर्न सकिन्छ । जबसम्म महिलालाई सामाजिक, आर्थिक कानुनी तथा राजनैतिक परिवेशदेखि विभिन्न साधन श्रोतको पहुँचमा लिङ्गको आधारमा विभेद गरिन्छ तबसम्म अन्तरनिहित क्षमताको बिकास हुन सक्दैन । जबसम्म महिलाहरु शारीरिक मानसिक रुपमा त्यस्ता दवाब मूलक कार्यले शोषित भैरहन्छन् तबसम्म क्षमताको बिकास हुन सक्दैन ।
महिलालाई साच्चैनै सशक्त बनाउने हो भने नयाँ ढङ्गले अगाडी बढ्नु पर्छ । उपलब्धि मूलक अभियान चलाउनु पर्छ । ता कि अभियानले नयाँ मोड लियोस् ।
बर्षेनी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका १६ दिने अभियान पनि हुँदै आइरहेका छन् यसको उपलब्धि कति भयो कुनै लेखाजोखा छैन । महिला भेला गरायो हिंसाका कुरा सुनायो, कानुनले यसो भनेको उसो भनेकोछ भन्यो सकियो । यति गरेर हिंसा मुक्त सशक्त हुन्छन् त महिला ? अवश्य हुँदैनन् ।
यदि हामी जो कोहीले महिला लक्षित हिंसा विरुद्ध अर्थात महिलाहरुलाइ सशक्त गर्ने खालका कार्य गर्छौ भने महिला कतिसम्म सशक्त भए ? उनीहरुको बौद्धिक बिकास भयो कि भएन ? महिलाको क्षममता कति वृद्धि भयो ? हिंसा भए पश्चात् उजुरी गर्ने सम्बन्धित निकायायमा महिलाहरुको पहुँच पुग्यो कि पुगेन यावत कुरा थाहा पाउन अत्यन्त जरुरी छ । पछिल्लो समयमा महिला माथि भैरहेका हत्या हिंसाका र बलात्कारका श्रृंखला हेर्दा अत्यन्त दुःख लाग्छ । अभियान अभियान मात्र भए भनेर । आधा आकाश ओगटेका महिलाहरु बलात्कार, यातना, बेश्याबृत्ती, बेच्नबिखन, हिंसाजस्ता क्रियाकलापको चपेटामा परिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । समतामूलक समाज माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।